Archive du 20181008
Nisy ny fotoam-pivavahana omaly alahady tany amin'ny FJKM Imerinkasinina, izay nanomezan'ny Fiangonana tsodrano ho an’i Marc Ravalomanana kandida laharana faha-25, ho tody soa aman-tsara amin’ny tanjona, dia ny ho tonga indray eo amin’ny toeran’ny filoham-pirenena, hanarina sy hampandroso an’i Madagasikara.
Lesoka amin’ny lisi-pifidianana Mampiaka-peo ny TIM
Mikasika io lisi-pifidianana io, dia efa nitabataba izahay fa tsy nisy nihaino, hoy ny Depiote sady mpisolovava Hanitra Razafimanantsoa avy amin’ny antoko TIM. Miantso ny CENI sy ny goverenamanta satria tsy nisy lisitra ratsy noho io, hoy ny teknisianina maro. Mbola nokitihina ny lisitra taorian'ny 15 aprily, ka nankaiza ireo nesorina ary iza ireo nampiana?
Praiminisitra Ntsay Christian Azo hesorina, hoy ny mpahay lalàna
Isan’ny miteraka resabe ny fetran’ny fahefan’ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao, indrindra mikasika ny filazana fa tsy afaka manolo praiminisitra ny tenany.
OnitianaRealy Aza mampihorohoro e !
Ny voka-pifidianana amin’ny 7 novambra 2018 ihany no ahitana hoe iza no favori sy lanim-bahoaka, hoy Rtoa Onitiana Realy talen’ny fampielezan-kevitry ny kandida Hery Rajaonarimampianina omaly.T
Antoko FAIMA “Olona matahotra an’Andriamanitra no ilaintsika”
Nanomboka androany tamin’ny 6 ora maraina ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ho filoham-pirenena hotontosaina ny 7 novambra izao.
Bokin’ I Andry Rajoelina Hampiana-dratsy tanora?
Nivoaka sy naparitaka tetsy amin’ ny zaridainan’ i Andohalo ny asabotsy lasa teo ny boky mirakitra ny tantaram-piainan’i Andry Nirina Rajoelina mitondra ny lohateny hoe « Par amour de la patrie ». Resahina sy hita ao avokoa ny fahazazany, ny fiainany manokana, ny mampiavaka azy ary ny lalany ara-politika izay nodiaviny.
Kandida Orlando Robimanana Niharan-doza ny fiara nitondra azy
Niharan-doza teo anelanelan’Antalaha sy Sambava omaly alahady tokony ho tamin’ny 7ora sy fahefany hariva teo ny fiara nitondra ny kandida laharana faha 35 Orlando Robimanana.
Fampielezan-kevitra Hanao izay fara heriny ireo antoko politika
Tsy misy intsony ny sakatsakana fa nigadona ity ilay andro malaza. Nanomboka androany tamin’ ny 6 ora maraina ny fampielezan-kevitra amin’ ny fifidianana filoham-pirenena izay tontonsaina ny 07 novambra ho avy izao ny fihodinana voalohany.
KMF-CNOE sy ny Liberty 32 Velon’ahiahy tanteraka ny amin’ny fifidianana
Betsaka ny tsy fanarahan-dalàna miseho miharihary araka ny fanambarana nataon’ny KMF/CNOE sy ny Liberty 32 tetsy amin’ny Immeuble Santa Antanimena tamin’ny sabotsy 06 oktobra lasa teo raha fiatrehana fifidianana no resahana.
ANTOKO MFM Manohana an-dRajaonarimampianina
Tontosa soa aman-tsara ny faran’ny herinandro teo rehefa naharitra roa andro ilay vovonana notanterahin’ny antoko MFM teny Ambatomirahavavy, nentin’izy ireo nifanakalozan-kevitra sy nifandresena lahatra.
Fampielezan-kevitra any Farafangana Misy olana sahady
Anio alatsinainy 8 Oktobra no hanomboka ny fampielézam-kevitra araka ny voatondron,ny lalana mifehy ity fifidianana Filohampirenena ity.Diikany tokony ho tafapetraka alohan,io fepotoana io avokoa ireo fitaovana ilaina momba izany.
Paul Pody “Zava-doza no ao anaty IEM!”
Nijoro vavolombelona mikasika ny zava-natrehiny fony izy tao anaty vondrona Mapar ny mpahay lalàna sady filohan’ny antoko RDR, Paul Pody, ny sabotsy teo, tetsy amin’ny biraon’ny hetsi-bahoaka ho an’ny fanovana sy fanorenana ifotony etsy Antaninandro.
Fitsarana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana Hanao fanovana ny mpitsara anatin’ny “ANJA”
Hanatanteraka atrikasa (atelier) ny Fikambanana ANJA (Association Nationale Pour La Justice Administrative) na Fikambanana nasionalin’ireo mpitsara ny raharaha momba ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana anio 8 oktobra hatramin’ny 12 oktobra 2018 ho avy izao.
Telma Coupe de Madagascar 2018 Norombahin’ny Elgeco Plus Analamanga
Nifarana omaly alahady 07 oktobra 2018 tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ny fifaninanana baolina kitra « Telma Coupe de Madagascar 2018 ». Ny ekipan’ny Elgeco Plus Analamanga no nandrombaka ny amboara sy medaly volamena tamin’ity taona ity niampy taratasim-bola 3.000.000 ar avy amin’ny
Basket Alley Hoop RDJ Fantatra ireo hisolotena ny Boriborintany 1 sy 3 ary 4
Fantatra avokoa ihany koa ireo ekipa 9 avy ao amin’ny Boriborintany 1 sy faha-3 ary faha-4 hiatrika ny dingana famaranan’ny fifaninanana basikety Alley Hoop fanamarihan’ny ny faha-15 taonan’ny RDJ “Radio Des
Raikitra ity ny propagandy efa nandrasan’ny maro, ka hanakoako manerana ny tanàna ny fampielezan-kevitra. Samy niomana ny kandida tsirairay avy amin’io, ary samy manana ny paikadiny.
Lozam-pifamoivoizana teny Ankazobe Tovovavy iray hanatrika JMJ no maty
Tovovavy iray vao erotrerony satria vao 22 taona monja, izay anisan’ireo tanora Katolika handeha hanatrika ny JMJ any Mahajanga no namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana teny Ankazobe telo amin’ny PK 114 + 500 teo amina Tanana antsoina hoe Ampivoarana, ao anatin’ny kaominin’Ankazobe.
Lalam-pirenena faharoa Mahazo 2000 ariary isan’andro ireo ankizy manamboatra lalana
Ny fotoanan’ny fialan-tsasatra lehibe tahaka izao no tena mampahazo vahana ireo ankizy manao asa an-tselika eto amintsika. Ankoatra ny fitaomana biriky sy ny famakiana vato ary ny tsaka ranon’orana ho antsika eto an-drenivohitra dia tena mahazo vahana be ihany koa any amin’iny lalam-pirenena voalohany iny ireo ankizy mikarama manamboatra làlana.
Nikorontana ny fiangonana tetsy amin'ny Fjkm Analakely omaly. Ny anton'izany dia ny savorovoro teo amin'ny samy mpino tao, izay mahakasika ny fanalàna na tsia ny mpitandrina Dina Razaf. Nisy hatramin'ny vadin-tany sy mpitandro ny filaminana tonga tao am-piangonana.
Takela-kazo fametahana afisy
Anio no manomboka ny fampielezan-kevitra kanefa mahagaga ihany ny tsy fahitana ireo takela-kazo fametahana afisin’ ny kandidà miisa 36 manerana ny Nosy kanefa ilain’ny mpifidy izany afisy izany mba hahafantarany izay ho tohanany. Ho atao ihany ve ny fifidianana sa tsia?
Ry zareo avy eo anivon’ny hetsi-bahoaka ho an’ny fanovana sy ny fanorenana ifotony dia naneho fisaorana ireo kandida miisa 22 sahy naneho ny ahiahin’izy ireo mikasika ny fifidianana. Manao antso avo azy ireo kosa anefa ity hetsika ity mba hiroso lalindalina kokoa.
Mponin’ny Faritra iva Sahirana amin’ny fitadiavana izay harapany ny ankamaroany
Betsaka ireo fianakaviana Malagasy tsy mihinana afa-tsy indray mandeha isan’andro intsony ankehitriny noho ny hasarotan’ny fiainana. Amin’ny atoandro na amin’ny alina tokana ihany no mba miara-mihinana izay misy eo am-pelatanana ny isam-pianakaviana noho ny fahantrana lalim-paka mianjady amin’ny isam-baravarana.
Mpiasam-panjakana matoatoa Miisa 120 ireo efa tratra hatreto
Mbola betsaka ireo mpiasam-panjakana matotoa eto amintsika. Miisa 120 sahady ireo tratran’ny « Association Sportive Interministerielle pour l’éducation des fonctionnaires » tarihin’Atoa Randrianarison Jean Aimée Botosera, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe : John love.
Kaominina Ambanivohitra Ambohimanambola Notokanana ny trano vaovao
Notokanana ny zoma 5 oktobra 2018 ny trano vaovaon’ny kaominina Ambanivohitra Ambohimanambola ao amin’ny distrikan’Avaradrano.